Waraysiyada, 06 January 2019
Axad 6 January 2019
Gabar 10 sano jir ah oo u Dhimatay Gudniinka Fircooniga ah.
Gabar toban sano jirta ayaa la sheegay inay ku dhimatay toddobaadkii hore magaalada Dhuusamareeb kadib markii waalidiinteed oo ay wada degganaaneeyeen dhulka baadiyaha ah oggolaadeen gudniinka fircooniga ah. Dr. Cabdiraxmaan Cumar Xasan oo Agaasime ka ah cisbitalaka Xannaano ee magaalada Dhuusamareeb oo xaaladda gabadha dhimatay ka hadlay ayaa sheegay in uu dhaawac culus ka muuqday xubneheeda taranka.
Falanqeyn: Doorka Maraykanka ee Soomaaliya
Kooxda al shabaab ayaa weerar ku dishay hal asakari oo Maraykan ah, sidoo kale afar askari oo kale oo Maraykan ah ku dhaawacday weerarkaasi. Ugu yaraan laba askari oo Soomaali ah ayay al-shabaab isla weerarkaasi ku dhaawacday